China Chair Injection bobongolo orinasa sy mpanamboatra | HEYA
Lasitra ao an-trano
Mamolavola ny fako
Lasitra hafa ao an-trano
Lasitra sotro / Fork / antsy
Bobongolo rindrina manify
Lakozia bobongolo hafa
Bobongolo Appliance ao an-trano
Bobongolo indostrialy sy fambolena
Auto Parts bobongolo
Lasitra seza tsy misy sandry
Bobongolo seza amoron-dranomasina
Bobongolo tsindrona seza
Lasitra tsindrona seza ivelany
Bobongolo seza plastika
Bobongolo seza plastika ratten
Heya Mould dia mpanamboatra bobongolo matihanina amin'ny famolavolana sy fanaovana mould tsindrona seza. Ho an'ny fomban'ny seza, ny bobongolo seza dia ahitana ny fomba nentim-paharazana sy ny endriny manokana, toy ny bobongolo amin'ny seza plastika rattan, bobongolo tsindrona seza ivelany, bobongolo seza plastika azo raisina, mpanamboatra bobongolo tsindrona seza,
bobongolo seza amoron-dranomasina sy ny sisa.
Taizhou Heya Mould Co., Ltd dia manaraka ny foto-kevitry ny fahaizana asa tanana sy ny fahatsoram-po, mijery tsara ny fahazoana sy ny fitsaboana ny antsipirian'ny Mould Chair ary miezaka manome ny mpanjifa vokatra avo lenta sy serivisy avo lenta.
Izahay dia manizingizina amin'ny famokarana am-po, serivisy mazoto, manome lanja ny famoronana rohy famokarana tsirairay, mitady fampandrosoana miaraka amin'ny teknolojia, mitady mpanjifa manana kalitao, ary manome anao vahaolana vahaolana amin'ny famokarana bobongolo.
Izahay dia hanome anao drafitra fanonona mifaninana mifanaraka amin'ny vokatrao sy ny bobongolo takiana.
Manantena ny hiara-miasa aminao izahay hamoronana ho avy tsaratsara kokoa.
Ireto ny fampahalalana lehibe ho an'ny referansa anao ：
Anaran'ny vokatra Bobongolo tsindrona seza
Famolavolana bobongolo China namboarina lasitra tsindrona plastika
Bobongolo vy S45C, P20H, 718H, 2738, S136, H13 sns.
Product Material PP, PC, PS, PAG, POM, PE, PU, ​​PVC, ABS, PMMA, sns
Base bobongolo LKM, ISM, HASCO, DME
lavaka Single / Multi-lavaka arakaraka ny filan'ny mpanjifa
Fiainana bobongolo 300,000 ~ tifitra iray tapitrisa
Mpihazakazaka karazana Mpihazakazaka mangatsiaka / mafana
Karazana vavahady Vavahady pin -point, vavahady Submarine, vavahady sisin-tany, sns
Ora nanomezana 30 ~ 60 andro
Fonosana Raharaha hazo mahazatra
Fitaovam-pitaterana Amin'ny ranomasina na amin'ny rivotra no takian'ny mpanjifa
Firenena fanondranana Eran-tany
Ny vy lehibe sy ny hamafin'ny lasitra ho anao:
Kilasy vy S50C P20 P20HH 718H 2738H H13 S136 NAK80
Hamafin'ny (HRC) 17-22 27-30 33-37 33-38 36-40 45-52 48 ~ 52 34-40
A: Heya Mould dia orinasa mamolavola plastika.
F: Ahoana ny fandefasana santionany fanandramana? maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Heya Mould dia handefa santionany fanandramana amin'ny DHL, UPS, EMS, FEDEX na TNT. Ary ny teny nindraminay dia omena anao ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana santionany in-1-2.
F: Ahoana ny fifehezana ny kalitao?
A: manana ekipa matihanina i Heya Mould hifehy ny kalitaon'ny bobongolo, ary mino izahay fa ny fanaraha-maso ny kalitao no laharam-pahamehana voalohany amin'ny fampandehanana orinasa.
1.Adopt ny rindrambaiko mandroso CAD / CAE / CAM iraisampirenena miaraka amina ekipa R&D mitombo haingana sy haingana
2.From ny vokatra famolavolana ny famolavolana bobongolo, arahi-pitantanana iray, aza hadino ny olana.
3.Fantatra ny firafitry ny vokatra sy ny bobongolo, firafitry ny bobongolo mety sy milamina, izay mora ampiasaina sy tazomina ho an'ny mpanjifa.
4.Confidentialité, mba hanarahana ny fitsipi-pitondrantena sy ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa
5.Ass Assembly sy fonosana fonosana, vokatra AZO ampiasaina amin'ny varotra tsena terminal
6.Mahomby, mankamamy ny fotoanan'ny mpanjifa ary fenoy ny mihoatra ny asa.
Previous: Lasitra tsindrona seza ivelany
Manaraka: Bobongolo seza